ဖွ ကြည့် မိ ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » ဖွ ကြည့် မိ ခြင်း
ဖွ ကြည့် မိ ခြင်း
Posted by မောင်ဆန်း on Feb 21, 2013 in Editor's Choice, Myanma News | 33 comments
လမ်းမှာ တွေ့ခဲ့တာလေး သာမန် အခြေအနေ တစ်ခုလို့ မယူဆ လို့ ရွာသူားတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ် အဲ နဲနဲ ဖွ ချင်ပါတယ် ဖွ ခွင့်ပြုပါနော… ဒီရက်ထဲ ရန်ကုန်မြို့က ပြည်လမ်းမကြီးဘေး ဆက်သွယ်ရေးက ကြိုးလိုင်းတွေ မြုပ်ဘို့ မြောင်းတွေ တူးနေတာ တွေ့တယ် ၊ တူးတာက ယောကျာင်္၊မိန်းမတွေ အပြင် ၈/၉ နှစ်အရွယ် ကလေး ငယ်တွေပါ ပါနေလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသေး ဒီအချိန် ဒီအရွယ်ကလေးငယ် တွေ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ စာမေးပွဲ ဖြေနေရမဲ့ အချိန် မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေးဆိုတာ သူတို့နဲ့ မဆိုင်လို့လား ကလေးအလုပ်သမား မခိုင်းရဘူးဆိုတာ ဘယ်သူတွေကိုလဲ ငေးမိ တွေးမိ ပေမဲ့ တခြားလူတွေ သွားပြောမိရင် ငါတို့ ဆီ ဒိထက်တောင် ပိုသေးလို့ အပြောခံရကိန်း မြင်လို့ မပြောဖြစ်တော့ဘူး… ဒီနေ့ မနက်တော့ ကားလမ်းဘေး မနက်စောစော ပိုင်းလိုင်း ကိစ္စ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်တွေ့လို့ ကားရပ်ရင်း ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ သိအောင် စပ်စုကြည့်မိတော့ ငါ့စကားသူ မသိ သူ့စကား ငါ မသိ တဲ့ ကိုယ်ရွှေတရုတ်တွေ ဖြစ်နေလို့ တော်တော်လေး အံသြသွားပါတယ်… လုပ်နေတာက ပန်းရံ အလုပ်ပါ ဆက်သွယ်ရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ ပညာရှင် ရာထူးတွေ မဟုတ်ပါဘူး လုပ်ငန်းခွင်က ဆက်သွယ်ရေးက တိုက်ရိုက်ခိုင်းတာလား ၊ တခြား အပြင် ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခုက ခိုင်းတာလားတော့ မသိရဘူး ၊ ဒီလို ကိစ္စမျိုး ကျောက်ဖြူ ပိုက်လိုင်းကိစ္စမှာ ကြာဖူးလိုက်တယ် အခြေခံ အလုပ်သမားတွေက တရုတ်တွေတဲ့ ၊ အခု တော့ ရခိုင်တင် မဟုတ် ရန်ကုန်မြို့ထဲထိပါ အောက်ခြေ အလုပ်သမားအဖြစ် လာလုပ်နေကြတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အခြေခံ အလုပ်သမားတွေက ဘာလုပ်ကြရတော့မှာလဲ..
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ ဥပဒေမှာတောင် မြန်မာတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်လုပ်ငန်းတွေမှာသာ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင် ခန့်ရမယ် ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ပဲ ရှိရမယ် နှစ်ဘယ်လောက် ကြာရင် မြန်မာပညာရှင် ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ခန့်ထားရမယ်လို့ အတိအကျပြောထားတာပဲ…
အခု လုပ်ငန်းမှာ တရုတ်တွေကို (မြန်မာအလုပ်သမားတွေ လုပ်နိုင်တဲ့)အခြေခံလုပ်ငန်း အလုပ်ကြမ်း ခိုင်းခွင့် ရှိ/မရှိ ( ပန်းရံ လက်ရာကတော့ သာမန်လက်ရာပဲ)
သူတို့ မြန်မာစကားတော့ မပြောတတ်ဘူး မြန်မာ မှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားသလား/ပတ်ပို့စ် နဲ့ ၀င်လာတယ်ဆို ဘယ်လို ဗီဇာပေးထားသလဲ ၊ သက်တမ်း ဘယ်လောက်ရလဲ ၊သူတို့ ဘယ်မှာ နေထိုင်ကြသလဲ
ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေမှာ ကျင်းတွေတူး သူတို့ချည်းပဲ လုပ်နေတာ လုံခြုံရေးအရ စိတ်ချရမှုရှိသလား….
လက်ရှိ အခြေအနေမှာတောင် လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ကိစ္စ အားလုံးရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက တရုတ်ကို တရုတ်မယားအလုပ်ခံရဘို့ ရောင်းစားခံနေရတယ်တဲ့ ၊ ဟိုကို ခေါ်လာတဲ့ အထိ မစောင့်နိုင်တော့လို့ ဒီ ထိ များရောက်လာကြတာလား….
ဘာရယ် မဟုတ် .နဲနဲ ဖွ ကြည့် မိတာပါ နော..ရွာသူားတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ဒါမျိုး ဘယ်လောက်တောင် မြင်တွေ့နေရပြီလဲ …
( တရုတ်မုန်းတဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးတာ မဟုတ်သလို အဲဒီစိတ်လဲ လုံးဝ မရှိပါဘူး ၊ ဟိုး အရင်ကတဲ နေလာခဲ့ တဲ့ မြန်မာတရုတ်တွေ ၊ တရားဝင် ၀င်လာပြီး စီးပွားလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ တရုတ်တွေကို ဘာမှ ပြောစရာ မရှိပေမဲ့ ဒီ ကိစ္စကတော့ ဆက်တွေးကြည့်ရင် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတွေ ရှိတာမို့ ပို့စ် တင်ကြည့်ခြင်းပါ)
ဒီလို သာဆိုလျှင် … မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်း မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းတွေ နည်းပါးသွားမယ့်အဖြစ်လား ။
အခုနိုင်ငံသားပိုင် အမည်ခံပြီး ၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စက်ရုံတွေ ၊ ကမ်ပနီတွေမှာ ရာထူးမြင့်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာတွေဆို နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ ရကြတာ များတယ် ။ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အပိုင်း knowledge မရှိတဲ့ အပိုင်းမို့ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းခေါ်ခန့်တာ လက်ခံလို့ ရပေမယ့် … ဒီနိုင်ငံက ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်တတ်တဲ့ အလုပ်တွေလည်း နိုင်ငံခြားသားခေါ်ခန့်နေတာ သိပ်တော့ ဘ၀င်မကျဘူးရယ် ။ နိုင်ငံခြားသား ဗီဇာသက်တမ်းနဲ့ အခွန်ဆောင်ရတဲ့ ငွေကို တိတိကျကျစာရင်းလိုက်ပြီး တိုးမြင့်လိုက်လျှင်ရော ၊ လူမျိုးခြား အလုပ်သမားတွေ ၀င်လာတဲ့ အနေထား အဟန့်တားဖြစ်ပါ့မလား ။ တွေးကြည့်လျှင် စိတ်မောစရာကြီးပဲ … ။ :om:
ကျွန်တော်က ဆောက်လုပ်ရေးပိစိကွေးမှာ အခါအားလျော်စွာ ပါတ်သက်ပါဝင်ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ တွေ့ ရတာကတော့ မြန်မာ ပန်းရံတွေရဲ့ အားနည်းချက်ဘဲ ။ ချိန်ကျ မျဉ်းကျ မလုပ်ကြ၊ ပြီးလွယ်စီးလွယ် လုပ်တတ်ကျပါတယ် ။ အုတ်တံတိုင်းစီလိုက်ရင် ဟိုဘက် ဒီဘက်လည်း မြင်ရတာမျိုး ၊ မဆလာ မပြည့်တာ မျိုးတွေကော ၊ မျိုးစုံသော ပြဿနာတွေ တွေ့ ၇ပါတယ် ။ အဲ့ဒါတွေ သည်းငြီးခံ လုပ်တာတောင်မှ လာတစ်ရက် မလာတစ်ရက်လဲ လုပ်တတ်ကြပါတယ် ။
စည်းကမ်း မရှိတာ လဲ ပြောမနေနဲ့ ။ ကွမ်းတံထွေး တစ်ပြစ်ပြစ်နဲ့လည်း လုပ်ပါတယ် ။အသစ်ဆောက်ပါတယ် ..သူတို့ ကွမ်းတံထွေး တွေ.. ဟိုထွေးဒီထွေး ဘယ်လိုမှ ပြောမရပါဘူး ။ လက်သမားများလည်း ထိုနည်း၎င်းဘဲ ။
မောင်းထုတ်လိုက်ရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ပန်းရံ မစီတတ်တော့ တော်တော်လေးကို သည်းခံ ရပါတယ် ။
အလုပ်မရှိကြဘူး အော်ကြပေမဲ့ အလုပ်လည်း ကောင်းကောင်းမလုပ်ကြပါဘူး ….
အဲ့ဒါနဲ့ ဘဲ မခံနိုင်တော့ တဲ့ သူတွေ ဒါမျိုးတွေ ခေါ်သွင်းလာတာလားတော့ မသိ ….
ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်လာတာ နဲ့ အမျှ ဒါမျိုးတွေ ပိုတွေ့လာဖို့ ရာ ရှိပါတယ် ။
အဖြစ်မှန် ပြောတာနော် .. အားပေးတာ မဟုတ်
ကျမလည်း ကိုထူးဆန်းပြောသလိုပဲ အဖြစ်မှန်ကို ပြောတာပါ အားပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမတို့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက် ဟိုဘက်က( တရုတ်) လူတွေခေါ်တော့ အလုပ်ကြမ်းသမားပါပဲ ၅ ယောက်တဖွဲ့ကို နေစရာ စားစရာပေးပြီး ခေါ်ခိုင်းဖူးတယ်။ လုပ်ချက်က လက်လန်ပါတယ်။ အကြမ်းလည်း ခံနိုင်တယ် ။ စားလည်း စားနိုင်တယ်။ စားချက်ကတော့ လက်လန်လို့ မျက်လုံးတောင် ပြူးတယ်။ တနေ့တာ အလုပ်ကို မနက် ၇ နာရီကနေ စပါတယ်။ စကားလည်းမပြောဘူး။ မိုးချုပ်မှ သိမ်းတယ် ။ ကိုယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖူး ။ သူတို့ ဟာ သူတို့ လုပ်တာ။ ပြီးရင် တိုလီ မိုလီက အစ ကောက်သိမ်းသွားတာ။
နောက်တဖွဲ့ မြင်ဖူးတာက မူစယ်က အသိအိမ်ဆောက်တုန်းမြင်ဖူးတာ။ ဟိုဘက်က လူကို ၃ လစာချူပ်နဲ့ ပြီးအောင် ဆောက်ခိုင်းတာ ။ ပန်းရံ ၇ ယောက်နဲ့ပဲ ဆောက်သွားတာပါ။ နေ့ရော ညရော သူ့အလှည့်နဲ့ သူ။
ကျမအမြင်တော့ ခေတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ရောက်လာတဲ့သူတွေပါ။ တခါက သူကြီးပြောဖူးတယ်မှတ်တယ် ။ ဒီလူဦးရေ အချိုးစားနဲ့ နောက်ဆို တပြုံတခေါင်းခေါ်သွင်းလာရမယ်ဆိုတာ ။ ဒါက အကင်းပဲ ရှိသေးတယ်ထင်တယ်။
ဘေးက အိမ်နီးချင်းတွေက လူဦးရေများတယ် ဆိုတော့ တနိုင်ငံလုံးမှာ ရှိသမျှ စီမံကိန်းတွေတပြိုင်တည်းသာ စမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် အခြေခံအဆောက်အဦးလိုအပ်ချက်အတွက် ဒီလို အလုပ်သမားတွေလည်း ရှိကို ရှိလာမှာပါ။
ဒီက လက်သမား ပန်းရံသမား များက လက်ရှိကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံရ ပြောရရင် အလုပ်ပေါလာတဲ့ အချိန် သူတို့ခေတ်ရောက်လာတော့ သူတို့ က မြို့စွန်မှာနေတော့ သိပ်ဝေးတဲ့နေရာဆို အရင်လို စက်ဘီးနဲ့ မလာချင်တော့ပါဘူး ။ နီးရာဆိုဒ်မှာပဲ ဆင်းပါတယ်။
လာဖို့ကို လည်း အာပေါက်သလို လုပ်တာကလည်း မျက်လုံးကို ဒေါက်ထောက်ကြည့်ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု မရှိသလို မထီလေးစားတွေကလည်း များပါတယ်။
ခိုင်းရမဲ့သူက ဒီလိုလူတွေ ပဲ ရှိနေလို့သာ ကြိတ်မှိတ်နေတာပါ။
ပိုက်ဆံပေးရတာချင်းတူတူ တကယ်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်သမားဈေးကွက်အပြိုင်သာ ရှိလို့ကတော့ ကိုယ်တူတူ သူတူတူ တကယ်လုပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်သမားပဲ ငှားကြတော့မှာပါ။
ဆင်းရဲတွင်းက မလွတ်နိုင်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ။ လူကြောင့်ပါ။
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ခွင့်ပြုရာမှာ
နိုင်ငံသားတွေကို အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးသင့်တယ်လို့ထင်သဗျ
အခုပုံအတိုင်းသာဆို ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းက နည်းသွားနိုင်တယ်။
ဒါပေသိ သူတို့ စာချုပ်က ဘယ်လိုချုပ်ထားမှန်းမှ မသိတာလေ
အဲဒီ ဖိုင်ဘာ ကေဘယ် လိုင်းကို ၀ါယာလက် ဘက်မှာ လည်း လုပ်နေတာ တွေ့ရတယ်။
ကိုယ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်မလုပ်ချင်ကြဘူး နိုင်ငံခြား တခြားတဲခြားနေတာ… နဲတောင်နဲသေး..
ပညာတတ်တဲ့သူက ပညာတတ်သလောက် နိုင်ငံခြားသွား…..
ပညာမတတ် အောက်ခြေအလုပ်သမားကလဲ မတတ်သလောက် နိုင်ငံခြားသွား…….
ကဲအခုတော့ သူများနိုင်ငံက လူတွေ အလုပ်တွေလာလုနေကြပြီ… သိပ်မကြာတော့ဘူး.. ဟွင်းဟွင်း
နိုင်ငံတော်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကုမ္မဏီကြား ပရောဂျက်စာချုပ်တွေချုပ်ပြီး လုပ်ကြတာပါ။
အဲဒီတရုတ်တွေက တရုတ်ကုမ္မဏီဘက်က ၀န်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ပရောဂျက်တည်ဆောက်ရေး ကာလပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို လွဲပြောင်းတာမျိုးရှိတတ်သလို နှစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ တရုတ်ကုမ္မဏီက တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆက်လုပ်တာလဲရှိပါတယ်။ မန်း ဘက်က၀န်းကျင်မှာ အဲလို တရုတ်ဖက်စပ် ပရောဂျက် လုပ်ငန်းတွေ တည်ဆောက်ရေးတွေ ရှိနေလို့သိရတာပါ။ ဥပမာ- တရုတ်မြန် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ရေးတို့၊ လက်ကိုင်ဖုန်းထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံစီမံကိန်းတို့ အဲလိုပေါ့။သူ့ကုမ္မဏီကပရောဂျက်ကို သူတို့ဝန်ထမ်းပြန်လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့။
တက်တက်ကြွကြွ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ ဒေါ်အိဒုံ၊ကိုထူးဆန်း၊ဒေါ်ပု၊ သိကြားမင်း၊good၊ကိုတိုက်၊ ကိုခင်ခ တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်ပိုင်း ဒီ မြင်ကွင်းမျိုး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုတွေ့လာရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက စင်ကာပူလို တိုးတက် နိုင်ငံသားတွေက လစာကောင်းကောင်း လူနေမှုအဆင့်မြင့်မြင့် နေနိုင်ကြလို့ တခြားနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်ကြမ်းလာလုပ်ကြတာ ပြောစရာ မရှိပေမဲ့ ဒီနေ့ အခြေအနေမျိုး မှာ ဒီလိုဝင်လာတာကတော့ မြန်မာ့ လူမူပတ်ဝန်းကျင်ကို ရိုက်ခတ်မှု ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်
စာချုပ်ပါအရ သူတို့ ကန်ထရိုက် သူ့အလုပ်သမား လာလုပ်တယ် ၊ သူတို့ အလုပ်သမားတွေ ကလဲ ပေးရတဲ့ငွေနဲ့ တန်အောင်လုပ်တယ် ၊ ကျွန်တော် အလုပ်ရှင် ဆိုလဲ သူတို့ ကိုပဲ ခိုင်းချင်မှာပဲ ဒါပေမဲ့ အဲဒါမျိုး များလာရင် ကိုယ့်လူမျိုး အခြေခံ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်လာမယ် ၀င်ငွေမဲ့လာမယ် အဲဒီလို ဖြစ်လာလို့ကတော့ တိုင်းပြည် တိုးတက်တာ မတိုးတက်တာ နောက် ကျွန်တော်တို့လဲ ကောင်းကောင်း နေရမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် သူ့တို့ ပြသနာက ကိုယ့်ကို ရိုက်ခတ်လာမှာ အသေအချာပဲ ၊ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ငါ့ အိမ်သန့်ရင် ပြီးတာပဲ ဘေးအိမ်က ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆို ကိုယ်ဘယ်လောက်သန့်သန့် ဘေးက မြောင်းပုတ်နံ့က ကိုယ့်ဆီရောက်လာမှာပဲ
ကိုယ့်လူတွေပဲ ကောင်း ကောင်း မကောင်းကောင်း ခိုင်းရမယ်လို့ အတင်းအကျပ်ပြောလို့ ကလဲ မသင့်ဘူး ၊ အစိုးရက စာချုပ်ကတဲက ဘယ်အလုပ်တွေတော့ နိုင်ငံသားတွေပဲ ဖြစ်ရမယ် ဘယ်အလုပ်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင် ဘယ်လောက်ပဲ ပါရမယ် အတိအကျချုပ် အသေအချာလဲ ကြီးကြပ် ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင် သေချာလေ့ကျင့် လုပ်ချင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်အောင် ဖန်တီး ရလာမဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး မြင်အောင်ပြ ၊ တာဝန်ရှိတဲ့ သူ အဆင့်ဆင့်က သေချာအကောင်အထည်ဖော် အဲဒီလိုမှ ရမှာပဲ
လုပ်ငန်းရှင်တွေက ခိုင်းကောင်းလို့ ဈေးသက်သာလို့ နိုင်ငံခြားသားပဲ ခိုင်းနေရင်တော့ ရေတိုမှာ အဆင်ပြေပေမဲ့ ရေရှည်မှာ ရိုက်ခတ်လာမဲ့ ဂယက်က ကြီးမယ်
တရုတ်၊ ဂျပန် ၊ အမေရိက အစရှိတဲ့ ( အလှူရှင်) နိုင်ငံတွေ တခြားနိုင်ငံတွေ ကို လှူတန်းနေကြတယ် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနေတယ် ဆိုတာ ပိုက်ဆံတွေ ပိုနေလို့ စေတနာရှိလွန်းလို့ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်အေးအေး မနေရမှာ စိုးလို့ တချိန်ကိုယ့်ပြန်ရန်ရှာမှာ စိုးလို့ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုက္ခပေးမဲ့ သူတွေ ရှိလာမှာ စိုးလို့ ကိုယ့်စကားနားမထောင်မှာ စိုးလို့ လုပ်ပေးနေတာပဲ
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ၀ိုင်းဖြေရှင်းဘို့ ၀ိုင်းအဖြေရှာဘို့ လိုမယ်
( အစိုးရက စာချုပ်ကတဲက ဘယ်အလုပ်တွေတော့ နိုင်ငံသားတွေပဲ ဖြစ်ရမယ် ဘယ်အလုပ်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင် ဘယ်လောက်ပဲ ပါရမယ် အတိအကျချုပ် အသေအချာလဲ ကြီးကြပ် )
တည်ဆောက်ပြီးရင် လွဲအပ်သည့်အခါ အာမခံပေးရတာတွေ ပါတတ်တယ်လေ။ ဆိုလိုတာက မိမိတပ်ဆင်တဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ ၂ နှစ် ၃ နှစ် စသည့်ဖြင့် ခိုင်ခံကြောင်း အရည်အသွေးကောင်းကြောင်းပေါ့၊ အဲဒီ အာမခံနှစ်အတွင်းမှာဆို တည်ဆောက်တဲ့ သူဘက်က ပြန်လုပ်ပေးရတယ်၊ ဒါကြောင့် အစထဲက သေချာစနစ်ကျအောင် ကုမ္မဏီအတော် များများ မိမိဝန်းထမ်းကိုဘဲ ဦးစားပေးခိုင်လာတဲ့သဘောပါ။
ဥပမာ- ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီက ပြင်ဦးလွင်ဘက်မှာပရောဂျက်တစ်ခုသွားလုပ်ရတယ်၊ အဲဒီပရောဂျက်ဝန်းကျင်က အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေကို ဌားရမ်းပြီး ကိုယ်ဘက်က ကြီးကြပ်လုပ်စေခဲ့တယ်၊ အဲဒီမှာ ရေသာခိုတဲ့သူကခိုတယ် ကြီးကြပ်သူ လစ်ရင်လစ်သလို သတ်မှတ်စံထက်ခိုပြီး အလွယ်လုပ်တယ်၊ သူတို့တွေရဲ့အတွေးမှာ တစ်နေ့ပြီးရင် လုပ်ခ ဘယ်လောက်ရမယ် ဒါဘဲသူတို့တွက်တယ်၊ နောက်ပိုင်း ခုနပြောတဲ့ အာမခံစနစ်တို့ စံနှုန်းတို့ သူတို့လာမပြောနဲ့ နားထဲမ၀င်ဘူး၊ အဲဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ တစ်ချို့နေရာတွေ ပြန်ပြင်ရလို့ အချိန်ပိုကုန်တယ် ပိုပင်ပန်းတယ်၊ ဒါကြောင့် ကုမ္မဏီတွေက ခုနောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဝန်ထမ်းဘဲသုံးလာတာပါ။
နိုဆိုမိပြောချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ပါတယ်။ ခက်တာက အလွယ်ရ အလွယ်လုပ်၊ နည်းနည်းပင်ပန်းခံပြီး များများလိုချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပေါ် တစ်ဦးချင်းစီ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ် အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ စိတ်တွေသာပြင်လာကြမယ်ဆိုရင် ဒီက မြန်မာတွေကိုလုပ်ခိုင်းလဲ စိတ်ချရတယ် ကောင်းတယ်ဆိုရင် နေရာဆိုတာ တကယ်လုပ်ချင် သူတွေအတွက် မရှားစကောင်းပါဘူးလို့။
တည်ဆောက်ပြီးရင် လွဲအပ်သည့်အခါ အာမခံပေးရတာတွေ ပါတတ်တယ်လေ။ ဆိုလိုတာက မိမိတပ်ဆင်တဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ ၂ နှစ် ၃ နှစ် စသည့်ဖြင့် ခိုင်ခံကြောင်း အရည်အသွေးကောင်းကြောင်းပေါ့၊ အဲဒီ အာမခံနှစ်အတွင်းမှာဆို တည်ဆောက်တဲ့ သူဘက်က ပြန်လုပ်ပေးရတယ်၊ ဒါကြောင့် အစထဲက သေချာစနစ်ကျအောင် ကုမ္မဏီအတော် များများ မိမိဝန်ထမ်းကိုဘဲ ဦးစားပေးခိုင်လာတဲ့သဘောပါ။
ဒဂျီးတို့များ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းပို့စ်ဆို တမ်း ချွိုက်တော့တာပဲ…
wow ပြောတာ ကွက်တိပဲ ဗျာ
ထောင်းတဲ့ ပို့စ် ဆို သူကြီးက သိပ်သဘောကျတာ အဲလူကြီးတော်တော်ဆိုးတာပဲ
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ့်လှန်ထောင်းရတာဆိုတော့ နဲနဲတော့ သက်သာတာပေါ့
တခြားလူ ၀င်ထောင်းရင် မချောင်ဘူး နော
မန်းဂေ ကို ဝင်ကြည့်မိတော့ ကိုနိုပို့စ်ကိုတွေ့မိပြီး သိတာလေး ဝင်ဖွလိုက်မယ်။
အဲဒီ တရုပ်အောက်ခြေ အလုပ်သမား ဆိုတာတွေကို စားရိတ်အကုန်ခံပြီး ဒီကို တကူးတက ခေါ်လာတယ်ထင်သလား။ အဲဒီလူတွေက တရုပ်ပြည်က ထောင်သားတွေပါဗျာ။
ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း တို့ ဘာစီမံကိန်းတို့ အတွက် တရုပ်ပြည်က ထောင်သားတွေကို ကျွမ်းကျင်တာ မေးပြီး အလုပ်တွေ ခွဲချပေးလိုက်တာပါ။ လုပ်ခ မပေးပဲ စားသောက်တာပဲ ထောက်ပံ့ထားတာပါ။ စီမံကိန်းပြီးရင် သူတို့ လွတ်ပြီ။ ဒီမှာ ချန်နေနိုင်ရင် နေခဲ့။ မနေတတ်လို့ မြန်မာအစိုးရ ဖမ်းခံရရင် ကိုယ့်ကိစ္စ။ တရုပ်ထောက်လှမ်းရေးက မြန်မာပြည် လူဝင်မှု က ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်လောက် ချောင်မှန်း အစီရင်ခံပြီးသား။ တရုပ်တွေကို ဒီမှာလွှတ်ပြီး နယ်ချဲ့ တဲ့လုပ်ရပ်။ သြစတေးလျ မှာ အင်္ဂလိပ်တွေ မီးရထားလမ်း နဲ့ အခြားတည်ဆောက်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့တုန်းက ပုံကို တရုပ်က ပြန်ကူးချထားတာ။ မြန်မာပြည်က လျော့ရဲနေတော့ သူတို့ လက်အောက်ခံလို လုပ်ချင်ရာ လာလုပ်နေကြတာ။ အစိုးမရ တဲ့ အစိုးရ က မသိတာ တော်တော် အသည်းနာတယ်။
ကိုလင်းမြွေ ကြီး မတွေ့တာတောင် ကြာလှပြီ ဗျာ
အခုလို ကွန်မန့်မျိုးလဲ ရွာက လူတွေက မျှော်နေကြတာ
ကျွန်တော်တို့ဘက် က အခုလို ၀ိုင်းပစ် ၀ိုင်းအော်တော့ အစိုးမရမင်းများလဲ သိတာပေါ့
ကိုလင်းဝေကြီးလဲ တပည့် တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို နဲနဲ မှာ ထားပါဦး ဗျာ
အောက်ကကောင်တွေ ၊ ဦးစီးမှူး ဆိုတဲ့ကောင်တွေ က ပိုက်ဆံယူ မျက်လုံးမှိတ်ထားမှတော့
နောက်ဆိုရင် ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာတောင် အဲဒီ ဝမ်စိကွမ်စိ တို့ တက် မဆလာနယ်နေလောက်တယ်ဗျို့ 
မသိသေးတာတွေ အများကြီး သိလိုက်ရပါတယ်ဗျာ
အဲ့တော့.. ကိုကြီးလင်းဝေနဲ့ ကိုဇိုမီရေ…
၁) အဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုနေရာ ဘယ်လိုအဆောက်အဦးမှာထားသလဲ။ စီမံကိန်းအပြီးအထိ
၂) လက်ရှိမြန်မာပြည်အတွင်းမှာလဲ တရုတ်စကားမွှတ်တဲ့ ရှမ်းစတဲ့ တိုင်းရင်းသူတွေရှိနေတော့
ငြိပြီး အိမ်ထောင်ကျလျှင် နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရသလော။
၃) စီမံကိန်းပီးလို့ တရုတ်ပြည် မပြန်တော့မဲ့ အလုပ်သမားတွေကို လျော့ရဲ လ၀က ဘယ်လို
ရှိူ့..ရှိူ့.. ရွာထဲက ကြောင်ကြီး ရန်သူ တရုတ်ထောင်လှန်းရေး ကြေမှုံကြီးသာ ရှိူ့ကြဒေါ့..
History Repeats Itself တဲ့..။
ဒီတခေါက်မြန်မာပြည်ထဲဝင်မှာက.. ချိုင်းနား.. ဂျပန်.. ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေကဆို.. ဗုဒ္ဓဘာသာ လိုင်းချင်းတူသူတွေမို့..နည်းနည်းအကျသက်သာမယ်..။
.. နောက်တခါ ..
သမိုင်းဘီးလည်တဲ့.. နှစ်၅၀-၁၀၀လောက်ဆို.. တော်တော်ကောင်းသွားနိုင်ကြောင်း…
China hints at ending its labor prison camps – CNN.com
by Steven Jiang – in 174 Google+ circles – More by Steven Jiang
Jan 8, 2013 – Hints emerged Monday that China may terminate its controversial system of labor prison camps this year.
China ‘to reform’ controversial labour camps – Asia-Pacific – Al …
Jan 8, 2013 – State media announces reform to labour camps, contradicting earlier reports of removal of the … China’s supreme court and other officials declined to comment on the issue. … Myanmar holds peace talks with ethnic groups …
အခုလို ပြင်ပက အောက်ခြေအလုပ်သမားတွေ ၀င်လာရင် ၂မျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။
တမျိုးက ပြည်တွင်းက အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ အရင်ကလို ရေသာခို အချောင်လိုက်နေလို့ မရပဲ အလုပ်ကို အလုပ်နဲ့တူအောင် လုပ်လာကြပြီး ဈေးကွက်ပြန်လုယူတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ်ပဲ အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ အလုပ်က မရ။
အလုပ်မရတော့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာပြီး ဆိုးသွမ်းလုယက်တာတွေ ပိုများလာရင်တော့…..
ကိုမှိုပစ်လိုက်တဲ့ခဲလေးက အတော်ထိရောက်တယ်။ :hee:
law of fittest တဲ့၊
အလုပ်ရှင်ကတော့ သူ့ တွက်ခြေကိုက်တာ ရွေးမှာပဲ။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကလူတွေ အခြားတိုင်းပြည်သွားလုပ်ရင် သူတို့ကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်။
မလေးမှာ Levi Tax ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
အလုပ်ရှင်ကလည်း နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားခေါ်ခိုင်းရင် အဲဒီအတွက် အခွန်ဆောင်ရတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
အခု ကျမတို့ဆီ လာလုပ်ရင်လည်း အစိုးရက အခွန်ကောက်ရမှာပေါ့။
အဲဒီအခါ အလုပ်ရှင်က မျှခြေ ဖြစ်မဖြစ် စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။
အခု စင်္ကာပူမှာဆို နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသား၊အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်လို့ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေ ကျောင်းကောင်းမရ၊အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ လျော့တယ်လို့ ဆန္ဒပြကြတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
ဒါလည်း မျှခြေဖြစ်နေသေးလို့ မြန်မာတွေ စင်္ကာပူ၊မလေးမှာ ကျောင်းတက် အလုပ်ရနေသေးတာပေါ့။
အဲတော့ အလုပ်ရှင်ကို မခေါ်ပါနဲ့ ကန့်ကွက်လို့တော့ မရလောက်ဘူး။
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ရင် ဘယ်လိုအခွန်တွေဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းပါ။
ဒို့ ရွှေမြန်မာတွေ ပြည်တွင်းမှာလည်း စံချိန်မီအောင်လုပ်ကြပါတော့လို့။
Survival of fittest ပါ။
သဂျီးမင်းမလာခင်ကြိုကန်ထားမှ ( ကွိကွိ )
အဲ့ဒါ ပြည်တွင်းက လူသားစွမ်းအင်တွေအပြင်ရောက်နေလို့ဘညာကွိကွတော့ မလုပ်နဲ့နော်
အထူးသဖြင့် ထိုင်းတို့ မလေးရှားမှာတို့စင်္ကာပူရ တို့ ချောင်ကြိုချောင်ကြားမှာ နေတဲ့
ငတ်လို့ပြည်ပထွက်ရှာစားတဲ့ သန်းချီတဲ့လူသားထုကြီးနဲ့တော့မဆိုင် မစီ
တိုင်းပြည်ကြီးကို ဒို့ပြန်ကယ်မယ်လို့ ဘယ်သူမှမကြွေးကြော်ဘူးနော်
ချောင်တဲ့နေရာလိုက်နေတဲ့သူတွေက လူထုကြီးကို တယ်အသုံးချတယ် အနိစ္စ
အဲ့သည်ကိစ္စက သူတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုတော့
သတင်းတွေကို သေခြာဖြတ်နားထောင်ဘို့ ကိရိယာဘာညာကွိကွတွေပေါ့
လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်ဗိုလ်တွေ အပီနေရာယူထားတာရယ်
ထိုင်ခုံတွေကို ဖင်မကြွဘဲ နေရာပြောင်းကြတာရယ်ကိုထောက်ရှု့ပြီး
လွပ်လပ်ရေးရတော့ နေဝင်က တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တယ်ပြောတယ်
88 ပြီးတော့ အာဏာ၇ှင်တွေနဲ့ နွားတွေက သံယံစာတတွေအကုန်ရောင်းတယ်
ကျုပ်တို့ ယုံကြည်တဲ့တရားထဲကနေဆို နတ်ပြည်ကြီးအတိုင်းသားရှိသေးဒယ်
ချောက်ထဲကျမယ့် မြန်မာပ်ြညကြီးကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့သူက.. (ပြည်ပပြန်တွေထဲ) လူ၁၀၀ မပြည့်ပါဘူး..။
.. သေရင်ကောင်းဖို့.. ခင်ဗျားတို့မှာ.. နတ်ပြည်ကြီးအတိုင်းသားရှိသေးတယ်..
တစ်ခု ချိန်ထိုးကြည့်လို့ ရတာက
မြန်မာပြည်ထဲက အလုပ်သမားတွေ တယုတ်နိုင်ငံထဲမှာ
၂၄ပေ x ၈ ပေ စာ ဗီရို (လေးလုံးခွဲပြီးလုပ်တာ)ကို
ကျုပ်တို့လူမျိုး လက်သမားသုံးယောက် တစ်လနဲ့နှစ်ရက်ကြာတယ်။
တရုတ်လက်သမားသာဆို နှစ်ယောက်လုပ်ရင် ငါးရက်မကြာလောက်ဖူး…။
(လက်သမားမျိုးနွယ် ဟပ်က တရုတ်လူမျိုးတယောက်ရဲ့မှတ်ချက်ပါ)
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေ လက်ကြောတင်းလာဖို့
အပြိုင်အဆိုင်ရှိဖို့လိုလာပြီ လို့ ထင်မိတာပဲ…
မဟုတ်ရင်- ဒီအတိုင်းရေသာခိုသွားလို့ကတော့ နောက်မျိုးဆက်နှစ်ဆက်လောက်ဆို ရစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူး…။
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုး(တိုင်းရင်းသားအားလုံး)ကို အခြားနိုင်ငံသားအခြားလူမျိုးတွေထက်
မညံ့ မဖျင်း မပျင်း စေချင်တာ၊ တန်းတူရည်တူ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိစေချင်တာ အမှန်ပါပဲ…။
၀န်ကြီးတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ် … မြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီး လက်ကြောတင်းရဲ့သားနဲ့ ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင် သူ့ဆီကို လာခဲ့ပါတဲ့ … ထမင်းလဲကျွေးမယ် နေစရာလဲပေးမယ် လစာလဲကောင်းကောင်းပေးမယ်တဲ့ …
ပို့(စ) ရယ်၊ ကော်မန့်တွေရယ်ဖတ်ပြီး အတော်မောသွားတယ်။။
ဒါတွေ တပြိုင်နက်ကောင်းပါမှပဲ၊ နိုင်ငံအတွက်ကောင်းတော့မယ်။
“ဘုရားကိုသွားတိုင်း တောင်းတဲ့ ဆုက မင်းရဲ့ နောက်လူကောင်းပါစေ”
တရုတ်တွေ အဲလောက်ခိုင်းကောင်းရင် မြန်မာစစ်တပ်မှာ ဘာလို့ဒင်းတို့ကို ခေါ်မသုံးပါလိမ့်…။ တရုတ်အစိုးရမှာ ဝှက်ဖဲတခုခု ရှိကောင်းရှိမယ်ထင်တယ်၊ ဥပမာ – မြန်မာဖက်ခြမ်း သူတို့လွှတ်တဲ့နေရာ အချိန်တခုအတွင်း လုပ်ပေးရင် အိမ်ပြန်တဲ့အခါခါ အခွင့်အရေး တခုခုပေးမယ် ဘာညာပေါ့ဗျာ… အောက်ခြေလုပ်သားတွေကို ပြောပါတယ်၊ ပညာတတ်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ဆြာပုပြောသလို မြန်မာတွေ ထောင်သောင်းချီ တရုတ်ဖက်မှာ အလုပ်စုံလုပ်နေ၊ အိမ်နီးခြင်းတိုင်းပြည်တွေမှာ အောက်ဈေးနဲ့ အလုပ်ကြမ်းဝင်လုပ်နေတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာတွေ ခိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတာ လူကြောင့်မဟုတ် မူကြောင့်လို့ ပေါဂျင်ဒယ်ဗျာ…။ ဒီနေရာမှာတော့ ဘူဇွာလက်သက် အရင်းရှင်ပေါက်စ ပုရ်ှလေးနဲ့ ဦးကြောင် သဘောထားဂျင်း တိုက်ဆိုင်ဗူး.. ဒင်းကို ကွာမယ် အချိုးမပြောင်းရင်…. နောက်တယောက် ရှာထားပေးဂျပါ….
အားလုံး တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အပေါ်က ပို့စ် ထက် အောက်က ကွန့်မန့် တွေက ပိုပြည့်စုံ ပိုကောင်းနေတယ်
ဖတ်ပြီးတော့ စဉ်းစားစရာတွေလဲ အများကြီး ရတယ်
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ ( အများစု) ပျင်းတာ ရေသာခိုတာ အချောင်လိုက်တာ ကတော့ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်နေပြီ လူမျိုး ရဲ့ သဘောကောင်းတယ် ကူညီတယ် ဆိုတဲ့ နောက်က ကပ်ပါလာတဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံထားနေရပြီ
ဒါပေမဲ့ လိုအပ်လာရင် တကယ်လုပ်နိုင်တယ် တကယ် လုပ်တတ်ကြပါတယ် မလုပ်တတ် မလုပ်နိုင်ရင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လို မှ မရပ်တည် နိုင်ပါဘူး ၊ ကိုယ့်လူတွေ လုပ်ချင်အောင် လုပ်တတ်အောင် အခြေအနေ ဖန်တီးပေးဘို့တော့ လိုမှာပဲ အကျင့်ဆိုတာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်တာက ဖြစ်လာတာပါ ကောင်းအောင် လုပ်လို့ ရ ပါတယ်
တခြားလူမျိုးတွေက ခိုင်းကောင်းလို့ အလုပ်ကျိုးစားလို့ သူတို့ကို ခိုင်းချင်တာက သဘာဝ ကျပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စတွေက အများကြီးပါ ဒီ နည်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မြန်မာပြည် ကို ကုလားတွေ ရောက်လာပြီး အခြေတကျဖြစ် လူစွာလုပ်လာကြတာပါ ၊
ကျွန်တော် တွေ့ဘူးတဲ့ ဥပမာ လေး တစ်ခု ပေးကြည့်ချင်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခါမှ မရှိဘူးတဲ့ စက်အသစ် တစ်မျိုး ရောက်လာတယ် မြန်မာလူမျိုးတွေ မကိုင်တတ်လို့ နိုင်ငံခြားသား ခေါ်ရတယ် အစပိုင်းကတော့ မှန်ပါတယ် ဘယ်နှနှစ်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ မြန်မာလူမျိုးကို ခန့်ရမယ် ဆိုတာ သတ်မှတ်မထားရင် အလွယ်ရတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အသုံးပြုနေရင် မြန်မာတွေ တစ်သက်လုံး ကိုင်ခွင့် ရမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ အဲဒီတော့ တဘက်က ဥပဒေ နဲ့ သတ်မှတ် တစ်ဘက်က ထိုက်သင့်တဲ့ ခံစားခွင့်နဲ့ ဘယ်လို အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံရမယ် ဆိုတဲ့ စံ နဲ့ စစ်ချလိုက်ရင် ကျိုးစားသလောက် ခံစားခွင့် ရှိရင် လုပ်လာကြမှာပါ
နောက် စိတ်ပူတာက ( နိုင်ငံခြားသားတွေ) စည်း မရှိ ကမ်း မရှိ အထိန်းအကွပ် မရှိ ၀င် ထွက် သွားလာ လုပ်ကိုင်နေတာပါ ၊ ဘာ အခွန်မှ မရ သူ တို့ ရှုပ်မဲ့ ပြသနာပဲ ရှင်းနေရမဲ့ အရေးအတွက်ကိုလဲ သေချာ ကိုင်တွယ်စေချင်တာပါ
ဒီခေါ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ဆီက လုပ်ပုံလုပ်နည်းယူတာ
၁ လ တန်သည် နှစ်လတန်သည်ပဲလေ
ဒေါ်ပု ပြောတာ မှန်တယ်
ကိုယ့်လူမျိုး ပညာတတ်ဘို့ ပညာပြန့်ဘို့ လုပ်တာ
နိုင်ငံခြားသာကို ယာယီ ခေါ်သုံးတာ တရားဝင်ခေါ်တာ
ဒါမျိုး က လုပ်ရမှာပဲ
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာတွေ မတတ်လို့ စိတ်မချရလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မြန်မာလူမျိုး ကို ပညာရှင် ဖြစ်အောင် သင်ခွင့် မပေးပဲ တသက်လုံး နိုင်ငံခြားသားက အုပ်စီးနေတာမျိုးကို တားဆီးဘို့ ဥပဒေ အတိအကျ လိုတယ် ဆိုတာ ပြောချင်တာ
ကျွန်တော် တကယ် ပေးချင်တဲ့ ဥပမာ ရှိတယ်
တဲ့ ပြောရင် ရှုတ် ကုန်မှာ စိုး လို့ စက် အသစ် ဆိုတာနဲ့ ဥပမာ ပေးလိုက်ရတာ